Sambatra izay tsy nahita nefa nino – filazantsaramada
Publié parfilazantsaramada	 avril 7, 2013 mai 31, 2013 Laisser un commentaire sur Sambatra izay tsy nahita nefa nino
Hoy Jesosy taminy: Satria nahita Ahy hianao, dia nino; sambatra kosa
izay tsy nahita, nefa nino. Jaona 20: 29
Jesosy maty ary nitsangana tamin’ny maty. Nihorohoro ny mpianatra, ary tsy
ho hitany intsony ny Mpampianatra azy ireo, izay nitaiza azy sy nikolokolo
azy, koa sady nalahelo izy ireo no nihorohoro noho ny tahotra ny Jiosy, izay
nandrindrinany ny varavarana izay niangonan’ny mpianatra. Eo anatrehen’izany no nitsanganan’i Jesoy teo afovoaniny: ka hoy Izy: Fiadanana ho anareo!
Taorian’izany dia zavatra maro no nataon’i Jesosy tamin’izy ireo:
– nasehon’i Jesosy azy ireo ny olatra teo amin’ny tànany sy teo amin’ny lanivoany.
– naniraka azy ireo Jesosy tahaka ny nanirahan’ny Ray Azy,
– nomeny ny Fanahy Masina,
– nomeny fahefana hamela heloka.
Nino ve ny mpianatra taorian’izany rehetra izany? Ny voadoratra aloha dia faly ny mpianatra raha nahita ny Tompo (vakio Jaona 20:20). Ny fahafaliany dia mitory fa nino izy ireo! Ny fahitana ny Tompo dia niteraka hafaliana teo amin’izy ireo.
Velona indray ny fanantenana fa tsy ho irery izy ireo fa eo ny Tompo, tsy voaidy tany am-pasana fa indro nitsangana eo afovoany. Faly ny mpianatra. I Tomasy izay tsy mba isan’ireo mpianatra nanatri-maso teo dia tsy nino. Rehefa afaka herinandro teo anefa dia niseho indray ny Tompo rehefa tafangona iny ny mpianatra ka voarindrina ny varavarana. Dia nasain’ny Tompo notsapainy ny olatra tamin’ny tanany sy tamin’ny lanivoany, ary dia niaiky i Tomasy fa ny Tompo io. Tompoko sy Andriamanitro.
Fantatry ny Tompo ny maha olombelona ny mpianatra, ka navelany
notsapaina mihitsy ny olatra teo amin’ny tanany sy lanivoany. Mila zavatra tsapain-tanana mandrakariva sy marika hita maso isika olombelona vao mino. Izany indrindra no nanomezany antsika ny Tenin’Andriamanitra izay hita maso ary azontsika vakiana mba hahamora ny finoantsika Azy: ny finoana dia avy amin’ny Toriteny, ary ny Toriteny dia avy amin’ny Teny. Dia nomeny antsika koa ny sakaramenta masina, indrindra ny fanasan’ny Tompo, mba ho marika
hita maso ahazoany manatrika antsika. Hoy Izy amin’izany: Ity no tenako raiso ka hano, ary indray, ity no ràko, izay nalatsaka ho anareo ho famelan-keloka, sotroy ity, izao no ataovy ho fahatsiarovana Ahy. Mila zavatra hita maso
mandrakariva ny olombeona vao mino. Didin’ny Tompo handray ny Sakramenta Masina isika mba ho velona mandrakariva eo amintsika Izy.
Didin’i Jesosy hino isika: Aza ho isan’izay tsy mino, fa minoa! Jaona 20:27.
Ny Lalàna dia mampahatsiaro antsika ny fahotana, mampahatsiaro antsika fa tsy mety ny ataontsika, fa ny Filazantsara kosa dia mampahatsiaro antsika
ny Fitiavana nitiavan’i Jesosy antsika, nanolorany ny ainay mba ho afaka amin’izany fahotana mitondra amin’ny fahaverezana mandrakizay izany isika. Ny filazantsara no mitondra antsika amin’ny finoana fa handray antsika Andriamanitra Ray raha miverina aminy indray isika. Aza ho isan’izay tsy mino, fa minoa!
Tsy nahita maso an’i Jesosy isika, fa ny fifankazarantsika amin’ny
Tenin’Andriamanitra no miteraka sy mampiorina ny finoana ao anatintsika. Izany no anomezany Fiadanana ho antsika.
Satria nahita Ahy hianao, dia nino; sambatra kosa izay tsy nahita nefa nino.
Na dia tsy nahita ny Tompo aza isika, dia sambatra isika raha mino
Azy, noho ny Teniny. Sambatra ny olona mino amin’izao androntsika izao, satria na dia tsy nahita ny Tompo aza isika dia mino! Aoka ary isika hifankazatra amin’ny Teniny, mba hiorina tsara ny finoantsika Azy.
Ny finoana mahavonjy, fa ny tsy finoana mahatonga ny fahatezeran’Andriamanitra!
Mety misy ary fotoana tsy niorenantsika tamin’ny Finoana ny Tompo.
Aoka isika hifona, ary hiverina amin’ny Tompo Jesosy. Fa izay rehetra manatona Azy tsy ho laviny mihitsy!
Publié parfilazantsaramada avril 7, 2013 mai 31, 2013 Publié dansUncategorized
Esory ny masirasira ela